Ny Bokin’i – Ny Mpitoriteny Fiverenan’i ny Mpanjaka | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Fananana malalako bilaogy mpamaky.
Faly aho manambara ny famoahana ny boky izay anaram-boninahitra dia mitovy toy ny bilaogy « The mpitory Miverena ny Mpanjaka »
Afaka efa baiko ho an’ny tonian-dahatsoratra « Edilivre » dieny mbola tsy ao amin’ny fivarotam-boky
Title-taratasy: « Ny Mpitoriteny Miverena ny Mpanjaka »
175 Boulevard Anatole Frantsa
Bat A, 2 Floor
Kristianina eo amin’ny fiaraha-monina dia tsinontsinona, nandao ka namono zavatra hatao fanatitra ho amin’ny tombontsoan’ny maha olona: amin’ny izay ny anarany no mahita fa isika dia miandalana « voafafa » ka ny fiangonana no nandrava. Hitantsika toy izany koa ny finoana silamo fiakaran’ny miavaka maneran-tany.
Raha mamaky ny lahatsoratra bilaogy, fantatrareo fa izany dia harbinger mafy famantarana ny akaiky fiverenan’ny Tompontsika sy Jesosy Kristy Mpanjaka.
Ka dia izay rehetra mety ho voavonjy, dia tsy maintsy manao izay rehetra azontsika rehetra atao mba ho izao tontolo izao mahafantatra sy mahatakatra fa i Jesoa Kristy no Mpanjakan’ny izao tontolo izao, ary izy no niverina ela hitsara ny olona sy ny firenena.
Izany no namorona bilaogy ity, ary misaotra anareo amim-pitiavana mba hitsidika sy mamaky ny lahatsoratra.
Ny bilaogy ankehitriny nitsidika ny in-500 isan’andro. Mety azo heverina ho tena fahombiazana.
Fa, izany no tsy ampy ny milaza amin’izao tontolo izao ny fiverenan’i Jesosy Kristy Mpanjaka, ary noho izany dia nanapa-kevitra ny hanoratra ny boky ka ny lehibe indrindra tsy fahazoana aterineto maro no nampahafantarina sy ny olon-drehetra dia afaka manapa-kevitra ny fanahiny sy ny feon’ny fieritreretany ny lalana tiany ny manaraka.
Amin’izao maizina fiaraha-monina, ny finoantsika dia voaporofo ary maro no nihevitra fa nafoin’Andriamanitra, fa marina aminareo fa tsy.
Andriamanitra tsy nandao antsika, dia tia antsika ampy mba namela ny zanany lahy izay madio fitiavana, dia tonga teto an-tany ary misy nametaveta, nanevateva, nokapohina ary farany amin’ny fahoriana mahatsiravina hohomboana amin’ny hazo fijaliana, ary nofantsihana teo amin’ny hazo fijaliana mandalo ny maty mba hamonjy antsika.
Indrisy fa isika dia tondraky ny fampianaran-diso, mpaminany sandoka sy ny andriamani-diso izay hanelingelina ny fahitana an ‘Andriamanitra sy manana zava-poana antsika handray lalana.
Noho izany dia te hitondra ny boky ny mpamaky ny porofo tsy tambo isaina ny fisian’Andriamanitra sy ny zanany lahy tokana i Jesoa Kristy.Izany no mba rehetra kokoa ny « mpino fa sachants ».
Ny boky dia maneho fa Andriamanitra no nahary izao rehetra izao sy izay rehetra eo aminy. Izany ihany koa dia manaporofo ny maha-Andriamanitra an’i Jesosy Kristy sy ny efa antomotra hiverina an-tany.
Na dia tsy boky ny tantara na ny siansa, dia manazava ny olona niala ny nitsanganany ho any amin’ny hiverina amin’ny Saha Edena ao ny fitondran ‘i Jesoa Kristy sy hahatakaranao ny hoavin’ny ny olona araka ny fitondran ‘i Jesoa Kristy.
Izany ihany koa dia mamaritra ny faminanian ‘ny fotoana farany, ary mamela ny mahafantatra ny ambony indrindra ny fiandrasana ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika.
Dia zava-dehibe ary na dia zava-dehibe ny haka aina eo amin’ny fiainana mba hitondra tahiry ny zava-manan-danja sy zava-dehibe eo amin’ny fiainana. Izao no Manasa anareo aho mba hanao izany amin’ny alalan’ny famakiana ny boky.
I Jesoa Kristy ho avy indray hitsara ny olona ela sy ny firenena, dia azo antoka fa tena sarotra ny andro teo aloha dia mbola mikapoka ny tany sy ny olombelona. Ny famakiana ny boky dia afaka manomana anao hiatrika izao fotoan-tsarotra izay mbola tsy maintsy miampita.
Namboatra fefy mamela anao manamafy fa ny fahoriana rehetra mitombo foana nandritra ny taona maro. Fa isika fanazavana sy ao amin’ny boky.
Manasa anao aho tsy hamaky ny boky, fa koa mba ho fantatra bebe kokoa mba afaka mamaky izany ary tonga saina fa ny marina tsy ny tena zava-misy dia isan’andro nanazava ny fiaraha-monina tsy mino an’Andriamanitra.
Aoka isika ho miaramila rehetra an’i Jesosy Kristy, dia ny adidy kristianina, ary miasa mafy mba fampahafantarana ny tsara teny hoe « i Jesoa Kristy no ho avy indray tsy ho ela »
Rehetra dia afaka ho voavonjy raha tonga amin’i Kristy amin’ny alalan’ny batisa sy ny fibebahana.
Dia tokony hahatonga antsika hiatrika ny zava-misy sy mahatsapa fa miaina eto amin’izao tontolo izao nandritra ny taona maro ny fotoana toy ny mafy tsirairay.
Ireo no famerenana isan’andro sy ny loza voajanahary toy ny outsized be ny orana, tondra-drano, tafio-drivotra, loza, horohoron-tany, rivo-doza, ny rivo-doza, ny afo, fipoahan’ny volkano.
Fa izany ihany koa isan-taona nandritra ny taona maro tsy misy fantatra maty isan-tapitrisa noho ny trondro, vorona, biby fiompy sy ny bibidia ny tany rehetra.
Izy ireo ihany koa ny ady sy ny feo mankarenin-tsofina izao tontolo izao ny ady, herisetra, fahaverezan’ny soatoavina sy ny fitondran-tena.
Ary izany ihany koa ny fidangan’ny radicalism sy ny Silamo mahery fihetsika izay novonoina mafana fo tafahoatra mpikambana ao amin’ny vahoaka kristianina sy manao fanimbazimbana, fanimban-javatra, fandoroana fananan’olona sy ny fandringanana ny fiangonana.
Tsy lazaina intsony ny manan-danja ao amin’ny Katolika fihenana Fiangonana ny mpisorona.
Ho zava-dratsy rehetra izany dia tsy maintsy manampy ny eran-fandringanana izay nanorim-ponenana manerana izao tontolo izao satria ny tsenam-haringana avokoa ny 29 Septambra, 2008, ka mahatonga ny mosary sy ny fahoriana na aiza na aiza, ny fiantraikan’ny dia rehetra ny tena zava-dehibe toy izao tontolo izao mponina nitombo avy roa sy sasany tapitrisa mponina tamin’ny 1950 ny fito tapitrisa mahery tamin’ny 2012, 63 taona ihany.
Na ny Vatican izay ny Masina Jereo ao amin’ny Fiangonana Katolika dia lasa toerana maimbo Jesosy Kristy efa lasa tsotra-javatra, na ny sombin-ny Vatican Museum.
Izany rehetra izany no hazavaina ao amin’ny boky.
Izay rehetra mahalala ahy fantany fa Izaho tsy kivy satria tsy misy tendrombohitra dia hay resena ary aho manohy miasa mba hanambara ny vaovao tsara toy ny maro ny tena akaiky Fiverenan’i Jesosy Kristy Mpanjaka.
Ho an’ireo te-hahalala hoe iza moa aho:
Eto fohifohy ampahany kely ny tantaram-piainany.
Zanaky ny elektrisianina portogey nifindra monina tany Frantsa tamin’ny 1957, dia lehibe tany katolika fanabeazana, katesizy, fiombonana sy Joc (Tanora Kristiana mpiasa).
Io fampianarana efa nanao ahy ho lehilahy kristianina fenitra.
Niezaka foana aho ary koa aho afaka hitarika ny fiainana ara-pahasalamana ao amin’ny fitiavana sy ny fanajana ny lalàna (tsy misy maha-olo-masina!)
Tsy maintsy milaza fa hatramin’ny mbola kely aho Andriamanitra foana teo amin ‘ny fiainako. Izy no tsaina iray nitokisany, ny namana, ny mpanolo-tsaina sy tena ilaina eo amin’ny fiainana andavanandro fanampiana.
Nandritra ny ampahany lava be ny fiainako no nanana tena sarotra sy manahirana asa sy Andriamanitra nanao fahagagana maro mba hiaro ny aiko amin’ny asa mampidi-doza ity.
Noho izany dia tsy misy zava-miafina avy amin’Andriamanitra ary efa tanteraka sy matoky azy tanteraka.
Andriamanitra mampiseho ny fitiavany ahy sy manome ahy mandrakariva ny fanampiana eo amin’ny fiainana andavanandro. Lazaiko marina aminareo fa madio izany fifaliana ny mahatsapa hoe tia sy nanampy ny amin’Andriamanitra.
Noho izany dia te ho any koa ho an’Andriamanitra ao amin’ny manetry tena kely fepetra mijoro ho vavolombelona ny fitiavany antsika sy ny akaiky fiverenana amin’ny tany ny zanany lahy tokana i Jesoa Kristy.
Tamin’ny 2009 avy amin’ny merest vintana Tsapako fa nonina tany amin’ny faran’ny fotoana ara-baiboly izay hifarana amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy.
Mazava ho azy fa Kristianina tsara nianarako tsara ny katesizy andro ho avy ny faran’izao tontolo izao, ary tamin’izany andro izany Andriamanitra, dia hiverina any an-tany mba hitsara ny olombelona rehetra.
Alohan’ny tsaina manaiky ny fiverenan’i Jesosy Kristy dia nomanina tsara ho an’ny taranaka, Namakafaka be aho kanefa ny faminaniana rehetra famantarana nanambara ny fotoana farany sy ny fiverenan’i Jesosy Kristy eto an-tany.
Aho tamin’ny farany maintsy nankany amin’ny porofo sy mahita fa ny famantarana rehetra sy ny faminanian ‘ny fotoana farany hialoha ny fiverenan’i Jesosy Kristy dia tanteraka isan’andro sy izay mety izany amin’ny fomba rehetra ho kisendrasendra toy ny maro ny faminaniana izay nanao zava-dehibe.
Izany no nanova ny fiainako tanteraka ary noho izany dia nanapa-kevitra ny hamorona ity bilaogy « Ny mpitory Miverena ao amin’ny mpanjaka »izay namoaka lahatsoratra maro amin’ny fiteny rehetra mba hampahafantatra ny olombelona rehetra ity hetsika mahafinaritra sy mandray anjara ihany koa fifohazan’ny tontolo izao ny Kristianina rehetra mba afaka miomana ny sainy sy ny fanahiny ho amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompo sy Mpanjaka, izay zanakalahy tokan’ny Andriamanitra.
Ny boky mikendry ny hampiseho ny mpamaky ny misy Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa Kristy, mba hanazavana ny fivoaran’ny olona an’Andriamanitra sy ny mampahafantatra ny betsaka indrindra ny fiverenan’ny mahafinaritra ity voninahitsika Tompo Jesosy Kristy noho ny arivo taona nanjakany.
Misy azo antoka eto amin’ity tontolo Tranga dia ny hoe i Jesoa Kristy no niverina ho ela.
Dia zava-dehibe sy zava-dehibe ny mahatsiaro fa Hoy i Jesosy Kristy:« Izaho no lalana, ny fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny ahy. «
Raha tsy izany, ianao no manao batisa ary maro tonga i Kristy mba ho voavonjy.
Tsy ho ela dia ho tara loatra, ary hisy ny tany rehetra sy ny ranomaso be mihiaka ny latecomers rehetra.
Manontany anao aho mba hampahafantatra sitraka boky ny ray aman-dreninao rehetra, namana, ny fifandraisana, ny fifandraisana sy ny tambajotra sosialy ho an’ny rehetra, mba hahafantatra sy hizara ihany koa ny indray kosa ny fitiavana an’Andriamanitra sy ho voavonjy.
Andriamanitra tia antsika, ary tia ny Zanany Lahitokana ho ela i Jesoa Kristy no mba hiverina any an-tany noho ny fiverenana ho amin’ny Sahan’i Edena izay rehetra tonga teo aminy.
Background Heart misaotra anao amin’ny zavatra rehetra ataonao amin’ny fitiavana sy ny voninahitr’Andriamanitra sy Jesosy Kristy!
Andriamanitra anie hitahy anao sy mamela anao hiasa ho amin’ny fitiavana sy ny voninahitr’i Jesosy Kristy.